Malala: Gabadhii Hore Guurka Ugu Qeexday 'macno La'aan' Oo La Meheriyey - Xogside-news Xogside
Home BARNAAMIJYADA Malala: Gabadhii hore guurka ugu qeexday ‘macno la’aan’ oo la meheriyey
Malala: Gabadhii hore guurka ugu qeexday ‘macno la’aan’ oo la meheriyey
Gabadha ku guulaysatay biladda nabadda ee Nobel Peace Prize Malala Yousafzai ayay is guursadeen lammaaneheeda cusub kadib ixaflad Islaami ah oo ka dhacday Birmingham.
Iyada iyo Casayr Maalik waxay ka qayb qaateen xaflad aroos, oo sidoo kale ay dad kale kasoo qeybgaleen.
24 jirkan u dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka ayaa sheegtay in ay u tahay “maalin qaali ah”.
Gabadhan oo si gaar ah ugu dhaqdhaqaaqa xuquuqda haweenka Pakistan ayaa magangalyo ka heshay West Midlands ka dib markii Taliban ay madaxa ka toogteen sanadkii 2012.
“Casayr iyo anigu waxaan aannu seeska u dhignay inaan noqono lammaane,” ayay ku soo qortay twitter Talaadadii, iyada oo la wadaagaysa dadka sida ay uga qayb qaateen “xaflad yar oo guurkooda ah oo ay ka qaybgaleen qoyskoodu”.
“Waan ku faraxsanahay inaan u midaw safarka nolosha ee nagu soo fool leh,” ayay raacisay.
Malala, oo hadda 24 jir ah, waxa ay jirtay 15 jir markii kooxda Talibanka ee Pakistan ay beegsatay iyada oo u hadlaysay xaqa ay gabdhuhu u leeyihiin in ay wax bartaan.
Way ka badbaaday weerarkaas, kaas oo nin xagjir ah uu la raacay baska dugsiga ee woqooyi-galbeed ee dooxada Swat ka dibna uu rasaas ku furay, oo dhaawacay laba ka mid ah saaxiibadeedii dugsiga iyo sidoo kale Malala.
Ka dib markii ay ka soo kabsatay dhaawacii u dhawaa in ay u dhimato, iyada iyo qoyskeeda waxay u guureen Birmingham, oo ay markii dambe u bixisay “gurigeedii labaad”. Iyadoo 17 jir ah, waxay noqotay qofkii ugu da’da yaraa ee ku guuleysta abaalmarinta nabadda ee Nobel. Waxay wax ka baratay Jaamacadda Oxford, waxayna noqotay hormuud u ololaysa xuquuqda aadanaha.
Tan iyo markii ay qalin jebisay, Malala waxa ay ku baaqday in si wanaagsan loo taageero qaxootiga Afgaanistaan, waxa ay heshiis la gashay Apple TV+ si ay u soo saarto dukumentiyo muuqaal ah, waxayna ka soo muuqatay jaldiga jaraa’idka caanka ah British Vogue, iyada oo sii wada shaqadeeda ahay si ay u horumar u gaadhaan haweenku.
In kasta oo aanu ahayn heshiisyada sharci ee waddammada reer galbeedka, haddana xafladda meherku waa tallaabada ugu horreysa ee guurka Islaamka.
Malala ayaa horay uga dhawaajisay dareenkeeda ku saabsan guurka.
Wareysi ay siisay Vogue bishii july, waxay tiri: “Weli ma fahmin sababta ay dadku u guursadaan.”
“Haddii aad rabto in aad qof yeelato noloshaada, maxaad u leedahay inaad u saxiixdo waraaqaha guurka, waxaad keliya la noqon kartaa shuraako?” Ayay hadalkeeda sii raacisay.
“Hooyaday waxay la mid tahay, marka ay iga maqashoo weedhahay.. “Ha ku dhiiran inaad sidaa tidhaahdo! Waa inaad guursataa, guurku waa qurux.”
Warka xaflada ayaa tobanaan kun oo jeer taageerayaasheeda bogagga bulshadu u rajeeyeen lammaanahan wanaag.
Previous articleMuxuu Turkigu hannaanka difaaca gantaallada ee ‘Siper’ ula barbardhigayaa hannaanka difaaca gantaallada ee Ruushka?
Next articleAamusku Waa Furaha Guusha!